ओलीले घातगरेको भन्दै ऐमालेमा गएका पूर्वमाओवादीले गरे विद्रोहको तयारी ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ओलीले घातगरेको भन्दै ऐमालेमा गएका पूर्वमाओवादीले गरे विद्रोहको तयारी ! - खबर प्रवाह
पूर्वमाओवादी समूहका एक एमाले नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भएको सहमतिअनुुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पूर्वमाओवादी समूहबाट पर्नुपर्ने शर्त थियो । त्यसैगरी, जनवर्गीय संगठन र दलित नेता भएको स्थानबाट एक÷एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पूर्वमाओवादीबाट ल्याउने भनिएको थियो ।
‘ओलीलाई माओवादीभन्दा राप्रपा प्यारो’
पूर्वमाओवादी नेताहरुका अनुसार शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङबाट मात्रै पूर्वमाओवादीबाट २३ जना आउनुपर्नेमा १ जनामात्रै प्रतिनिधि छानिएका छन् । असन्तुष्ट समूहका ती नेताले भने, ‘दाङमा हाम्रो राम्रो छ । तर, त्यहाँ ध्रुव आचार्यजस्ता सिनियरलाई ल्याएनन्, राप्रपाबाट अहिले भर्खर आएकालाई प्रतिनिधि बनाइयो । उहाँहरुका लागि हामी भन्दा राप्रपा प्यारो देखियो ।
असन्तुष्ट ती नेताले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको सबै सूची आइसकेको त छैन, देशभरबाट १५० जना जति आउँछन् भन्ने हाम्रो आँकलन थियो, अहिलेसम्म १ सय जति आएका छन् । मधेसबाटै हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि आएनन् ।’
सहमति पालना नभएको गुनासो
‘अब सहमतिमा, प्रतिस्पर्धामा र विचारमा पनि आउन गाह्रो भयो । एमालेकै १० भाइ पनि को कता लागे । दुईचार ठाउँ आए तर ओली पक्षकै बीचमा झगडा भयो’, पूर्वमाओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘हाम्रा मान्छे कतै पनि ल्याएनन्, उनीहरुले माओवादीका चारजना नेताबाट आएका भन्दा पनि एमालेसँगै जोडिएकालाई ल्याए । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा भनेजस्तो भएन । हाम्रो १० प्रतिशत पनि नहुने भयो ।’
एमालेमा असन्तुष्ट देखिएका ती नेता अगाडि भन्छन्, ‘ओलीजीले भिडियो सन्देश जारी गरेर सहमति भन्ने तर, एकलौटी गर्ने जस्तो देखियो । यस्तै हो भने हामी चुनावमा जाने कि नजाने भनेर सल्लाह गर्न बाध्य हुन्छौं ।’
ती पूर्वमाओवादी नेताका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम एक–एकजना, जनवर्गीय संगठनबाट एक–एक र दलित नेता भएको ठाउँबाट एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि लिने भनेर अध्यक्ष ओलीसँग मौखिक सहमति नै भएको थियो ।
त्यसक्रममा पूर्वमाओवादीका नेताहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्ने र ओलीलाई सहयोग गर्ने सर्त अघि सारेका थिए । ‘त्यसो गर्दा ५ जना प्रतिनिधि छानिँदा एकजना हाम्रो हुनुपर्छ भनेका थियौँ,’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘ओलीले म भित्र पनि भन्छु बाहिर पनि भन्छु भन्नुभएको थियो । तर, भिडियो सन्देशमा पनि उच्चस्तरीय समझदारी कायम गर्नु पनि डेमोक्रेसी हो भनेर अर्मूत कुरा गर्नुभयो ।’
एमालेका लागि जे भए पनि पूर्वमाओवादीका लागि यो महाधिवेशन नेकपाको निरन्तरता र एकताको महाधिवेशन नै भएको ती नेताले बताए । यही कारण तलबाटै पूर्वमाओवादीतर्फका प्रतिनिधिहरु आउनुपर्ने आफूहरुले शर्त राखेको उनले बताए ।
कांग्रेसलाई ओलीको प्रश्‍न- एमालेसँग एक्लै लड्ने दम छ ?
मधेशको समस्या सम्बोधन माओवादीले मात्र गर्न सक्छ : प्रचण्ड